WAR CUSUB: Qorshe lid ku ah imaaraadka oo ka socda Villa Somalia iyo madax looga yeeray imaaraadka.. | Allbanaadir News
WAR CUSUB: Qorshe lid ku ah imaaraadka oo ka socda Villa Somalia iyo madax looga yeeray imaaraadka..
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Dowlada Imaaraadka ay ka carootay Olole uu wado Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin oo doonaya in Dowlada Qatar ay qaadato Mashaariic dib u dhis ah iyo qalabeynta Ciidamada Dowlada Soomaaliya, iyadoo hore loogu saxiixay Mashaariicdaasi Imaaraadka.
Fahad Yaasiin ayaa door weyn ka ciyaaray guushii uu Madaxweyne Farmaajo ka gaaray doorashadii uu ku hantay Xilka Madaxweynaha ee 8-dii bishii February ka dhacday Magaalada Muqdisho tan iyo markaasna wuxuu saameyn culus ku leeyahay Heshiisyada waa weyn ee Dowlada saxiixdo ama ay iska diido, wuxuuna si gaara ula shaqeeyaa Dowlada Qatar uu u yahay Wakiilkeeda qarsoon ee arrimaha Soomaaliya.
Fahad Yaasiin ayaa tan iyo markii xiriirka Imaaraadka iyo Qatar uu xumaaday u ololeynayay in Dowlada Soomaaliya ay xiriirka u jarto Imaaraadka, waxayna taasi sababtay in Xiriirka Labada Dal uu xumaaday sidoo kalana aan rajo badan laga yeelan Wada hadalada Labada dhinac.
Hadaba Dowlada Imaaraadka oo ka careysan falkaasi ayaa dalkeeda iskugu yeertay Madaxweynayaasha Maamul Gobaleedyada iyo Siyaasiyiin caan ka ah Siyaasadda Soomaaliya.
Imaaraadka ayaa dooneysa in Masuuliyiintan ay shir ugu qabato dalkeeda, waxaana wararka ay intaasi ku darayaan in ujeedada shirka ay tahay in dib loosoo celiyo xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka.